Himalaya Dainik » क्रिकेट खेलाडीलाई एअरपोर्टमै कसले बाँड्यो भटाभट पैसा ?
क्रिकेट खेलाडीलाई एअरपोर्टमै कसले बाँड्यो भटाभट पैसा ?
सोमबार त्रिभुवन विमानस्थलमा क्रिकेट खेलाडीहरुलाई स्वागत गर्ने उभिनेहरुको लामै लाइन थियो । ठूलो सख्यामा रहेका क्रिकेट समर्थकहरुको बीचमा एउटा नाटकीय देखियो । एक महिला क्रिकेट खेलाडीहरुलाई समाउँदै हातमा खाम थमाउन प्रयासरत थिइन् । उनको हातमा खामको ठूलै बिटो थियो ।
सुरुमा उनले ललित राजवंशीलाई खाम थमाइन् । ललित जिल्ल पर्न नभ्याउँदै उनले अरु दुई–तीन खेलाडीको हातमा खाम राखिदिइन् । त्यसपछि ‘क्याप्टेन… क्याप्टेन’ भन्दै कप्तान पारस खड्काको खोजी भयो । यसरी भटाभट खेलाडीहरुलाई खाम थमाउँदा कौतुहल बढ्यो कि ती महिला को हुन् र खाममा के छ ?
अन्त्यमा थाहा भो उनी राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाकी पत्नी रहिछन् । तिमल्सिनाले नै त्यहाँ खेलाडीहरुलाई पुरस्कार बाँड्न लगाएका थिए । तिमल्सिनाका प्रेस विज्ञ अशोक पौडेलका अनुसार नेपाली टोलीमा रहेका २१ जनालाई जनही १० हजारको दरले नगद पुरस्कार बाँडिएको हो । ‘अध्यक्षज्यूले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट जम्मा २ लाख १० हजार पुरस्कार खेलाडीलाई प्रदान गर्नुभएको छ,’ उनले बताए ।